Maxaa keeney in labada teliye ku xigeen shaqa joojin lagunsameeyo – idalenews.com
Wararka naga s gaaraya magaalada mgadisho ayaa sheegaya in teliyaha nabad sugigada qaranka shaqa joojin kusameeyey labadiisa kuxigeen.
Arintaan ayaa lasheegey in ay timid kadib markii teliyaha lagu amrey in uu shaqada kajoojiyo kuxigeenadiisa, agaasimaha madaxtooyada smaaliya ayaa lasheegey in amarka uu siiyey teliya amarkaan lagu joojinaayo shaqada kuxigeenadiisa.
Warar lagu kalsoonaan kar ayaa sheegaya in maalmihii lasoo dhaafey khilaaf xogan udhaxeeyey madaxweynaha soomaaliya iyo raisulwasarahiisa ayadoo lasheegaayo in siixoogeysanaayo khilaafkooda
Teliyaha nabad sugida gobolka banadir saadaq joon iyo teliye kuxigeenka nabad sugida iyo sirdoonka qaranka jaamac ayaa lagu lagu eedeeyey in hub sharci daro ah soo geliyeen magaalada mogadisho ayadoona ku candacoodey in raisul wasaaraha la ogyahay arintaas.
Bilihii laso dhaafey ayaa waxa raisul wasaare kheyre lasheegey in uu sameytey ciidamo isaga ka amar qaata loo lagu magacaabo ciidamada xasilinta caasimada kuwaas oo ilaa hada aysan waxba ka qaban qaraxyada iyo dilalka kadhaca caasimada.
Agaasimaha madaxtooyada oo ka fal celinaya ayaa lasheegey in teliyaha ku amrey in uu shaqada kajoojiyo kuxigeenadiisa isla markaana digniin culus udiro teliyaha gobolka saadaq joon.
Lama oga sida uu ugu falcelindoono raisul wasaare kheyre amaradaan laduldhigey teliyaashii isaga si hoose ula shaqeyn jirey.